पूर्व युवराज पारस शाहको सम्पत्ति कति ? हेर्नुस – Online Khabar 24
पूर्व युवराज पारस शाहको सम्पत्ति कति ? हेर्नुस
पूर्व युवराज पारस शाहको सम्पत्ति कति ?
पारश शाहाको जन्म वि:स २०२८ सालमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहा र रानी कोमल राज्य लक्ष्मी शाहाको कोखबाट भएको थियो। उनी ज्ञानेन्द्रका एक्ला छोरा हुन्। उनकी एक बहिनि छिन्।
उनि २८ वर्षको हुँदा हिमानी शाहसँग विवाह गरे। अहिले उनका ३ वटा सन्तान रहेका छन्। तर अहिले भने उनीहरुको सम्बन्ध निकै बिग्रेको देखिन्छ। उनले नेपालका मात्र हैन विदेशी स्कुल, कलेज पनि निक फेरेका थीए।
उनकाे कुल सम्पत्ति कति ?
त्यो गाडिको नाम भनेको ट्राइंफ स्पिटफायर १५०० हो। जस्सको आज सम्म फोटो कसैले पनि खिच्न पाएको छैन्। एक पटक नागरिक दैनिकका पत्रकारहरुले बाटोमा गुडेको समयमा राम्रो लागेर यत्तिकै खिचेका थिए तर पछि आएर त्यो फोटो डिलिट गर्न लगाइएको थियो। अब तपाईले आफै अनुमान गर्न सक्नु हुने छ उनको सम्पत्ति कति छ ।
यो पनि पढनुस, पूर्वराजाले दशैंको टीका नलगाइदिने, शक्तिपीठको दर्शन नगर्ने
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले यस वर्षको दशैंमा सर्वसाधारणलाई टीका नलगाइदिने भएका छन् । शाहका स्वकीय सचिव फणि पाठकका अनुसार पूर्व राजाले अष्‍टमीको दिन शक्ति पीठहरुको दर्शन पनि गर्ने छैनन् । को’रोनाका कारण पूर्वराजाले यस्तो निर्णय लिएका हुन् । यसअघि विगत वर्षहरुमा पूर्व राजाले शक्ति पीठहरुको दर्शन गर्ने र सर्वसाधारणलाई टीका लगाइदिने गरेका थिए । साभार गरियको खबर
Prevगाउँमा पुगेर छत्र र काजलले गरे धुमधामले बिबाह ( तस्बिर सहित )
nextपानी बेचेर दिनको ३ सय कट्दैन, हात पसारेर खान स्वाभिमानले दिँदैन !